7 Factors for Choosing Contraceptive Methods - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယ်ဝန်မလိုချင်သေးတဲ့အခါ တားဆေးအမျိုးအစားများစွာရှိတဲ့ထဲကတစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
တစ်နှစ်၊နှစ်နှစ်အတွင်းကလေးပြန်ယူမယ့်သူဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်ပြန်စောင့်ရတဲ့ ၃လခံဆေး(ဒက်ပို)၊လက်မောင်းတွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်း၊သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတား ပစ္စည်း စတာတွေအစား ကလေးရဖို့အချိန်ကြာကြာပြန်စောင့်ဖို့ မလိုတဲ့ နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်တို့ ကွန်ဒုံးတို့သုံးခြင်းက ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
သုံး လေး ငါးနှစ်လောက်ကြာမှ ကလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ အထက်မှာပြောထားတဲ့ အချိန်ကြာကြာတားပေးနိုင်တဲ့ သုံးလခံဆေး၊သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း၊လက်မောင်းတွင်းထည့်ပစ္စည်း စတာတွေသုံးနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ အသက်၃၀စွန်းစွန်းဖြစ်နေပြီ၊ ခုချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ကလေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်၊ ကွန်ဒုံးတို့က ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။
သင့်အသက်အရွယ်အရ ကိုယ်ဝန်ရဖို့အချိန်ပြန်ယူရတဲ့ တားဆေးသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့သင့်တဲ့အသက်အရွယ်ကျော်လွန်သွားနိုင်ပြီး အသက်အရွယ်အရ ကလေးရဖို့လည်း ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာအလုပ်များသူတစ်ယောက်လား? သင်ဟာအလုပ်များတဲ့ ရုံး/ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလား? ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မအားလပ်သူလား?
ဒီလိုဆိုရင်တော့ နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်ကို အချိန်မှန်၊ရက်မှန် သောက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဆေးသောက်ချိန်မမှန်၊ ဆေးသောက်ဖို့မေ့လျော့ပျက်ကွက်တာတွေကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ် ထက်စာရင် သုံးလခံဆေး (ဒက်ပို) အပါအဝင် အခြားတကူးတက အချိန်မပေးရတဲ့ တားနည်းမျိုးက ပိုစိတ်ချရမှာပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ချစ်ရသူဟာ မိမိအပေါ်သစ္စာမရှိဘဲ အပျော်အပါးလိုက်စားတတ်မှန်းသိပါရဲ့နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်က မခွဲနိုင်လို့ (သို့)သားသမီးတွေမျက်နှာထောက်ရလို့(သို့)အခြားသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် လမ်းမခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင် ကွန်ဒုံးလေးတော့သုံးစေလိုပါတယ်။HIV/AIDS ,သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ အသားရောင်အသားဝါဘီပိုး စီပိုး အစရှိတဲ့လိင်မှ ကူးစက်တတ်တဲ့ ပိုးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။
ဟော်မုန်းပါဝင်တဲ့တားဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း၊ရာသီမမှန်ခြင်း၊ရင်သားများနာကျဉ်ခြင်း စတဲ့ဒဏ်တွေကို ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဟော်မုန်းမပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒုံး၊ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း စတာတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
-သင့်ချစ်သူ/အမျိုးသားဟာ နိုင်ငံခြား/နယ်ဝေးမှာအချိန်ကြာအလုပ်လုပ်နေသူ၊ တစ်နှစ်မှ တစ်ကြိမ်၊နှစ်ကြိမ်လောက်တွေ့ဖြစ်သူဆိုရင် သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်း၊လက်မောင်းတွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းကဲ့သို့ ရေရှည်တားမယ့်ဆေးတွေအစား အခြားသောက်ဆေး၊ထိုးဆေး၊အကာကွယ်များဟာ သင်တို့အတွက်
သင့်မှာကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်၊ဆေးတွေရေရှည်စွဲ သောက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ သင့်လျော်မယ့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေး တားဆေး အရေးပေါ်တားဆေး